Dhibaatada Tahriibka - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Telling the Real Story waxa ay ka dambeeyeen Barnaamij lugu qabtay magaalada Jigjiga, Dalka Ethiopia, oo la yiraahda ‘Refugees Got Talent”. Taageeraha Telling the Real Story, Aar Maanta, ayaa waxa ay u suurto qashay in u booqdo lana shaqeeyo qaxooti ku sugan xeryaha qaxootiga ee Shey Dheer, Aww-Barre iyo Qabribayax.
Heestan waxa qaaday ardayda qaxootiga ah oo ku sugan Qabribayax. Waxa ayna la hadleysaa dhalinyarada. Heesta waxa ay ku saabsan tahay dhibaatada safarka laga kulmi karo iyo dhibaatada qoyska soo haray ku dhacda.
Taariikhda wareysiga: 11 July 2017 | Taariikhda la badalay: 11 July 2017
Nolosha lama filaanka ah ee Yurub
Ka soo carartay dulmi